Ikhtiyaarada binary ka ganacsiga ee vfxAlert codsiga moobaylka | vfxAlert official blog
Mobile vfxAlert - faaiidada had iyo jeer waa kula jirtaa
Fursadaha binary waa lacag deg deg ah. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad furto heshiis waqtiga saxda ah. Nooca moobilka ee vfxAlert iyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee Jeebka fudud ee ku salaysan tilmaamayaasha farsamada ayaa kaa caawin doona inaad had iyo jeer suuqa gasho oo aad lacag samayso.
MACD oo leh goobaha caadiga ah . Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa sida isbeddelka iyo sida qalabka oscillator-ka, markaa waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee furitaanka ikhtiyaarka.
Laba jibbaaran (EMA) celcelis ahaan dhaqdhaqaaqa oo leh 20 iyo 30 . Tilmaamayaasha isbeddelka kaas oo aan ku go'aamineyno meesha furitaanka ee doorashada. Istaraatiijiyadda looguma talagelin ganacsi xilliyada barafka ah. Waxaan ka baayacmushtareynaa kaliya haddii kala duwanaanshuhu u dhaxeeyo ugu yaraan 15-25 dhibcood!
Ka dib marka lagu rakibo tilmaamayaasha jaantusyada Xulashada Jeebka , waxaanu eegnaa tusaalooyinka calaamadaha:
Calaamadaha ganacsiga ee ku jira abka dilaaliinta ee Pocket Option:
Xulashada wac . qiimuhu wuu ka sarreeyaa celceliska guuritaanka ama wuxuu ka soo baxaa xagga hoose ilaa kor. MACD waxay ka sarreysaa heerka eber.
PUT ikhtiyaarka . Xaaladaha ka soo horjeeda: qiimuhu wuxuu jebiyaa Celceliska Dhaqdhaqaaqa kor ilaa hoos ama hoos ayuu u dhaqaaqaa. MACD waxay ka hooseysaa heerka eber.
Calaamaduhu waa sahlan yihiin, laakiin kuwa bilawga ah waa inay hubaal sugaan xaqiijinta isbeddelka ama ka noqoshada qiimaha MACD. Gaar ahaan marka la isticmaalayo Pocket Option ganacsiga nuqul ka mid ah . Waxaan ka ganacsaneynaa fursadaha dib-u-soo-kabashada 3-5 shumac ka dib bilawgeeda, waxaan hubaal sugi doonaa dhammaan EMA inay dib u noqdaan.
Jibbaarada celceliska dhaqaaqa ayaa ku fiican qeexida isbeddelka hadda jira, laakiin waa in kaliya loo adeegsadaa oscillators. Kalsoonida calaamadaha waa la kordhin karaa iyadoo la aadayo waqti dheer. Laakin daqiiqadda xeeladda Pocket Option waxay siinaysaa 70-80% calaamadaha saxda ah.
Marka ay sii dheeraato dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah, waxay sare u qaadeysaa suurtogalnimada isbeddel xooggan ka dib marka la dhammeeyo. Xaaladahan oo kale waxaa suurtagal ah in la furo ganacsiyada calaamadaha ugu horreeya ee celceliska dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa iyo calaamado xooggan oo ka yimid vfxAlert iyo Pocket Option shaxanka app;
Haddii PocketOption-ka uu bixiyo fursad uu ku xidho ikhtiyaarka ilaa inta uu ka dhacayo, markaa hubaal waxaanu hagaajinaynaa macaamilka (xitaa haddii ay faa'iido leedahay!) Soo bixitaanka calaamad ka soo horjeeda - soo noqnoqda soo noqnoqda ee celceliska dhaqdhaqaaqa tartiib ለዉ no sodh175 ula socoto u socdo ama haddii ay tahay mid faa'iido leh! Histogram-ka MACD wuxuu beddelaa jihada heerka eber.